Ny 29 Janoary, miaraha mivantana aminay amin’ny ‘The Milk Tea Alliance: Tolona iraisan’i Thailand, Taiwan sy Hong Kong hisian’ny demaokrasia’ · Global Voices teny Malagasy
Fotoana ho alefa mivantana amin'ny Facebook Live, YouTube, ary Twitch
Voadika ny 24 Janoary 2021 7:18 GMT
Handeha mivantana ao amin'ny Facebook Live, YouTube, ary Twitch ny fotoana.
Jereo ny Nahoana no manao hetsipanoherana ireo tanora ao Tailandy [Ang.], fanangonana ireo fandrakofana ataon'ny Global Voices an'ireo hetsipanoherana, aingampanahy avy amin'ny Milk Tea Alliance tao Tailandy tamin'ny 2020.
Oiwan Lam, toniandahatsoratry ny Global Voices ny faritra Azia Avaratra-Atsinanana. Lam dia mpikatroka ho an'ny media, monina ao Hong-Kong, toerana nananganany fandraisana andraikitra marobe tamin'ny sehatry ny fanaovangazetin'olontsotra, isan'izany ny inmediahk.net sy ny factchecklab.org. Mampianatra taranja MA momba ny Media Vaovao sy ny Fiarahamonina ihany koa izy, eo ambany fiahian'ny Fandaharanasa Erantany ho any Fifandraisana, ao amin'ny Oniversite Shinao ao Hong Kong.
Darika Bamrungchok, Thai mpanao gazety sady mpikambana ao amin'ny vovonana EngageMedia, ary koa mpandray anjara ato amin'ny Global Voices.
Anna Lawattanatrakul, mpanampy ny mpamoaka lahatsoratra amin'ny teny anglisy ho an'ny fanontàna ny Prachatai ao Bangkok, izay sady media mpiaramiasa amin'ny Global Voices ihany koa.
Brian Hioe, toniandahatsoratra mpanorina ny gazetiboky New Bloom ao Taiwan, izay mandrakotra ny faritra Taiwan sy Azia-Pasifika, amin'ny teny anglisy.
Handrindra ny adihevitra i Mong Palatino, toniandahatsoratry ny Global Voices ho an'ny faritra Azia Atsimo-Atsinanana sy Oseania, izay nitantara ireo hetsika ihany koa.
Malalaka ny fidirana amin'ilay kaonferansa aterineto ary misokatra ho an'ny rehetra, sy ho alefa mivantana amin'ny Facebook Live, YouTube, ary Twitch. Ho azon'ireo mpijery atao ny maneho hevitra ary mametraka fanontaniana amin'ireo mpandray fitenenana. Amin'ny fiteny anglisy no hanatontosana ny fotoana.
Manantena anareo hanjohy anay amin'ny Zoma 29 Janoary amin'ny 1:00 tolakandro GMT (potsiro eto mba hahitanao ny ora mifanaraka amin'ny toerana misy anao)!